www.xamarcade.com » Puntland oo dhawaan ku dhawaaqeysa siyaasad lagu hago adeega EVC sida Sahal
Puntland oo dhawaan ku dhawaaqeysa siyaasad lagu hago adeega EVC sida Sahal
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee Puntland Cabdullaahi Siciid Carshe ayaa maanta kulan la qaatey ganacsatada sariflayaasha loo yaqaan, iyo qaar kale oo ka mid ah ganacsatada gobolka Nugaal. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa Bangiga Puntland, maamulka gobolka Nugaal iyo kan degmada Garoowe. Shirka ayaa looga hadley hadley diidmada lacagta shiling Soomaaliga, kala soocitaanka lacagta iyo dhibaatooyin kale oo
Dhibaatooyinka la soo bandhigey waxaa kamid ahaa lacagta Soomaaliga ee duuga noqotey oo la diidey taas oo si ba’an suuqyada u soo gashey kadib markii gawaari looga soo daabuley bartamaha Soomaaliya, sidoo kale caqabadaha la soo bandhigey waxaa kamid ahaa adeega Sahalka oo ay sheegeen in uu meesha ka saarey isticmaalka lacagta Soomaaliga taas oo muddo dheer soo socotey sida ay sheegeen ka qaybgalayaashii shirka, inkasta oo adeega Sahalka oo keliya aanu dalka ka jirin ee ay jiraan adeegyo kale sida eDahab. Sidoo kale waxaa shirka looga hadley sidii loo ilaalin lahaa xuduudaha lacagtu ka soo galayso.
Cabdullaahi Siciid Carshe Wasiirka Maaliyadda ee Puntland ayaa sheegay in Dowladda Puntland siyaasdad u dejisey barnaamijka xawilaadaha casriga ah sida Sahal, laakiin aanu ka hordhacayn ee dhawaan la soo bandhigi doono. Go’aamada soo baxaya ayuu sheegay in aysan ahayn kuwo cid gaar ah wax loogu dhimaayo ee noqon doono kuwo xal ah.
Puntland waa maamulka keliya ee Soomaaliya ka jira ee adeegyada EVC aysan xad lahayn, laguna kala iibsan karo cadad kasta oo lacag ah laysuna diri kado cadad aad u badan.
Wasiirka Maaliyadda ee Puntland ayaa sheegay in lacagta Soomaaliga Dowladdu qaadato shacabkana laga doonaayo in ay qaataan, inbadan oo kamid ah ganacsatada ayaa ku doodaya in dhibtu ay tahay Dowladda oo dekadda ku canshuurin lacagta Soomaaliga ah ee ku canshuurta inta badan Dollar.
Tan iyo bartamihii sanadkii 2015 maamulka Puntland waxa uu daabacayey lacag Soomaali kun shiling ah, inkasta oo maamulku dafiro, waxaa si faahfaahsan uga hadley Wasiir ku ixgeenkii hore ee Maaliyadda mar uu la hadley Somali Cable. Shacabka Puntland ayaa wadnaha farta uga haya in Dowalddu dhawaan ku soo deyso suuqyada lacag Soomaali aad u badan kadib markii ganacsatadu diideen in ay qaataan lacag aan ka ahayn tan Boosaaso lagu daabaco.